बिचार/विश्लेषण Archives — Page2of5— KhabarTweet::Nepali online news portal
बास्तबमा नेपालका सम्पुर्ण आदिवासि भूमिपुत्रहरु किराती हुन् -जुनकिरी
नेपालको ईतिहास लेख्ने बिद्वानहरु धेरै छन्। तर सत्य ईतिहास के हो? भन्ने विषयमा प्राय: मानिसहरु अनबिज्ञ छन्, साथै यस विषयमा खोज गर्न चासो सम्म पनि राख्दैनन्। नेपालको ईतिहासमा यो कुरा लेखिएको छ कि: नेपालको प्राचीन...
सामाजिक संरचनाको संरक्षकत्व नारी- प्रमिला राई
यो २१ औं शब्तादीको नारी जति एडभान्स छन् उति नै नराम्रो कामको शिकार बन्दै गईरहेको छ । सामाजिक रुपमा सबैभन्दा भन्दा पहिलो जिम्मेवारपुर्ण ठेक्का लिएका नारीहरु आज विभिन्न खालका समस्याहरुका कारण अग्रणी भुमिका देखिन...
अरूणमा फाल्दिने तात्कालिक माओवादीको धम्की
पूर्वपत्रकार राजधन कुलुङले २०५७ को अन्तिम महिनाबाट एक गैरसरकारी संस्था (गैसस) को कर्मचारीका रूपमा सार्वजनिक जीवन सुरु गरे । गैसस र तिनका कर्मचारीलाई माओवादीले राम्रो मान्दैनथे । जहाँ भेट्यो त्यहीं गाली गर्थे । ०५८...
रेडियो र पत्रकारितासँगको मेरो अनुभव
पूर्वी पहाडी जिल्लामा रेडियो प्रसारण भइसकेको थियो । भोजपुरमा एफएम रेडियो स्थापना भए पनि प्रसारण भएको थिएन । ‘खोटाङको रूपाकोट सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारित केही कार्यक्रमको नियमित श्रोता थिएँ,’ किरात राई पत्रकार संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष...
मेरो पहिलो महिनावारीको कथा
२०५० सालको मंसिर ८ गते मेरो स्मृतिमा आज पनि ताजै छ । मेरो स्कुलको वार्षिक परीक्षा मंसिर ६ गतेबाट शुरू भएको थियो । परीक्षाको समय भएकाले घरको काम गर्न त्यो बेला पर्दैन्थ्यो । स्कुल अलि...
अविवाहित आमाः गलत र हचुवाको बहस
अविवाहिता आमा सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्वन्धमा नेपालका चलेको वहस, के उपयुक्त हो ? अनि नेपाली समाज अविवाहिता आमालाई अंगिाकार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो ? अविवाहित आमालाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्नु कानूनी र...
आत्महत्याको कारण र समाधानको उपाय
पृथ्वीमा सृष्टिको सवैभन्दा बहूमूल्य उपहार मानव जीवनलाई मानिन्छ । मानिस सर्वश्रेष्ठ चेतनशिल सामाजीक प्राणी हो । मानिस कूनै पनि ठाउंँमा त्यतिकै बस्न सक्दैन उसले कूनै न कूनै कूरा सोचेको हून्छ र त्यही सोचले गर्दा...
मह गठबन्धनको इतिवृतान्तः मैले देखेको मदन दाइ
एकदिन अचम्म भयो । त्यसबेला हामी घट्टेकुलामा बस्थ्यौं । मेरै घरमा मदनदाइ र म स्क्रिप्ट तयार गर्दै थियौं । अलि शान्त ठाउँमा बसेर स्क्रिप्ट लेखौं भनेको, केही फुरे पो ! कहिलेकाहिँ त दिमाग पनि शून्य...
शारिरिक उचाईमा अग्लो र आर्य बर्णको मात्र हिरो हुने भ्रम चिरिदिए दयाहाङ राईले
दयाहाङ भएको फिल्म हेर्न नरुचाउने को पो होलान् र ? हालसालैको मिस्टर झोले कान्छी चलचित्रले निक्कै ख्याती पाए, अझै पाईरहेको छ। प्रदर्शनमा आएदेखी हालसम्म हलहरु टमाटम भरिदै आइरहेको देखिन्छ। बिशेष त दयाहाङ राई नायक...
भ्यालेन्टाइन डे’ प्रेम दिवस
१४ फ्रेवअरी ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात प्रेम दिवस । माया लाउने र माया खोज्नेहरुको उत्सव । भ्यालेन्टाइन डे प्रेम दिवस युवायुवतीहरुले ठुलो उत्सबको रुपमा मनाउने चलन बढेर गएको छ । भ्यालेन्टाइन डे मा आफ्नो प्रेमिका...